Roller fikosoham-bary - Mpamatsy Roller Hot Mill China, Factory –Jwell
Hot Mill Roller dia manana tanjaka mahery 、 faharetana sy fanoherana hafanana noho ny firafitra famolavolana manokana. Ny roller dia azo ampiasaina ao takelaka plastika avo lenta sy ravina mamolavola ary fitambarana hafanana tsy misy tenona.
Ny vatam-paty Mifidiana vy metaly faran'izay tsara toy ny 38CrMoA1A ， 42CrMo ， 60CrMoV ， 9Cr2Mo sns. dia azo tratra amin'ny HRC58-62 aorian'ny fitsaboana sy ny fitsaboana ny hafanana.
Ny famolavolana firafitra ao anaty ho toy ny fantsom-pandehanana sy ny lavaka fandavahana, ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana eo amin'ny lafiny roa ho kely kokoa ny roller ary ho avo kokoa ny fahombiazan'ny hafanana.
Tsipika famokarana sarimihetsika azo alaina PE